ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၈-၄-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၈-၄-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- ဦးပိုင်ကို မြေမရောင်းကြောင်း ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲ ကျင်းပ click
- တရားရုံးသွားသူတွေ ဝတ္တရားနှောင့်ယှက်မှုနဲ့ အရေးယူခံရ click
- တရုတ်ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ရွှေ့ပေးရေး click
- ကချင်အရေးမှာ အမေရိကန်ကို တရုတ် မလိုလား click
- မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ကဏ္ဍ တရုတ်သံရုံး ရှင်းလင်း click
- ပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ် စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ ... (တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း) click
- မြန်မာ့နယ်စပ်လုံခြုံရေးကို ဘင်္ဂလားဒေရှ့် အခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်းတွေ ခြိမ်းခြောက် click
- AI ၏ ဧပြီ ၅၊ လူ့အခွင့်အရေးဘတ်စ်ကားလှုပ်ရှားမှု မြန်မာပြည်အတွက်လည်း ပါဝင် click
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် Boao ဖိုရမ် တက်ရောက် click
- ပုဂ္ဂလိက နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ခံယူချက် (တနင်္ဂနွေ စကားဝိုင်း) click
- ခြစားမှုခင်းများနှင့် မြန်မာထိပ်တန်းအရာရှိကြီးများ click
- သမိုင်းတကွေ့မှ နိုင်ငံခြားသားများ (ဆောင်းပါး) click
- စင်္ကာပူမှာ မြန်မာအိမ်ဖေါ်တွေ ထွက်ပြေးနှုန်း မြင့်တက်လာ click
- ဟိတ်! ကိုယ့်တာဝန် . . . ကိုယ်ယူ click
- ရွှေတွံတေးဆရာတော် မဟာချိုင် ယာဉ်တိုက်မှုကြီး ၂ နှစ်ပြည့်ပွဲ ကြွရောက် click
- “ဝင်းဖေ ဘာကြောင့် စာရေးတယ်” ဝင်းဖေလွယ်အိတ် (အသံ) click
- လင်းလက်ကြယ်စင်နဲ့ သင်္ကြန် (အသံ) click
- ဝန်ကြီးကယ်ရီ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ရောက် click
- အီရန် နျူကလီးယားအရေး ဆွေးနွေးပွဲ ပြီးဆုံး click
- အီရန် နျူကလီးယားအရေးဆွေးနွေးပွဲ အောင်မြင်မှုမရှိ click
- နေတိုး တိုက်ခိုက်မှု အာဖဂန်ကလေး ၁၀ ဦး သေဆုံး click
- မြောက်ကိုရီးယား ဒုံးလက်နက် ပစ်လွှတ်နိုင်ခြေရှိ click
- မြောက်ကိုရီးယား စစ်ရေးပြင်မှု တောင်ကိုရီးယား သတိနဲ့ စောင့်ကြည့် click
- ပြုံယမ်းကိစ္စ တည်ငြိမ်စွာ ဆောက်ရွက်ဖို့ တိုက်တွန်း click
- ကိုရီးယားအရေး စေ့စပ်ဖို့ တရုတ် ပြော click
- အာရှစီးပွားရေး ၆% တိုးတက်ဖို့ IMF ခန့်မှန်း click
- အာရှ ပေါအောက် ဖိုရမ် စတင် click
- ဂီတလောကကို နှုတ်ဆက် သရုပ်ဆောင်ဘက် အာရုံစိုက်တော့မယ့် Meat Loaf click